Hlakanipha ngokwanele ukuthola izimpendulo | Martech Zone
Hlakanipha ngokwanele ukuthola izimpendulo
NgoLwesihlanu, Septhemba 11, 2009 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Ngasekuqaleni kwaleli sonto, ngithumele i-tweet ekhuthaza umkhiqizo omuhle kakhulu. Uhlelo lokusebenza lwalusebenza ngendlela ebabazekayo futhi lusizo ngendlela emangalisayo… kepha angikwazi ukuthola ukuthi kuyini wenza or Kanjani ukuyisebenzisa ngaphandle komsebenzi omningi.
Ngokushesha inkampani ibuyele ku-tweet ukuthi i-interface "ibilula". Ngiphendule, "ngiyabonga!". Bengingazukuphikisana nomqondo wabo. Ngokusobala babehlakaniphe kakhulu kunomsebenzisi wabo… i-techy enomdlandla ne-geek.
Ungahola ihhashi liye emanzini, kepha awukwazi ukuliphuzisa.
Vele, isikhombimsebenzisi sasilula ukukwenza nabo. Bayakha! Uhlelo lokusebenza okukhulunywa ngalo empeleni belusemakethe, alushintshiwe, isikhashana ngokwamukelwa okuhamba kancane kakhulu. Hmmm ... ngakho-ke asikaze samukelwa ngokushesha futhi sithole impendulo yokuthi isikhombimsebenzisi sethu besiyinkimbinkimbi. Mhlawumbe bobabili baxhunyiwe?
Akulungile ngempela ukuthuka umsebenzisi ngokucabanga ukuthi bayizimungulu. Ngokukhulumayo, kufanele uhlale ucabanga ukuthi bayizimungulu! Angisho ukuthi bonke abasebenzisi bayizimungulu… nje ukusetha 'uhlaka lwengqondo' lapho ucabanga ngolwazi lwakho lwamakhasimende.
Kwami ingxoxo noClint Page, uqoke imithombo yezokuxhumana njengomthombo wolwazi wamakhasimende ongakholeki - wonga imali yenkampani nesikhathi kuzinhlolovo, amaqembu okugxila kuwo, kanye namasu. Amakhasimende akhe ayawuthanda umkhiqizo, futhi ayazi ukuthi yini ayidingayo ukwenza izimpilo zawo zibe lula… kanye noDotster aphumelele kakhulu. UDotster wavele nje wabeka isisekelo ukuze aqale ukubalalela!
Uma uyinkampani yezobuchwepheshe, ingxoxo isivele iyenzeka ngomkhiqizo wakho! Ungacinga Twitter, zama i- Ikhasi Labalandeli kuFacebook, sebenzisa Izaziso ze-Google noma umane uthumele okuthunyelwe kwebhulogi bese ucela impendulo. Uma abasebenzisi bakho bazi ukuthi ulalele, bazokunikeza izimpendulo ozidingayo. Kumele uhlakaniphe ngokwanele ukuthola izimpendulo.
Yini Engalungile Ngekhadi Lakho Lebhizinisi?
Yakha iBlog Traffic nge-eCourse kanye nekheli Lesibili
Sep 11, 2009 ngo-4: 48 PM
Cabanga nje, lo mfana ukutholakala okulula okulula kude nokukwazi ukuphumuza ingalo yakhe. Abenzi besigqoko kudingeka bacabange kabusha i-chapeau interface.
Sep 12, 2009 ngo-4: 14 PM
I-Newsflash eya kubathuthukisi be-software. Akunandaba ukuthi isoftware yakho ibukeka ipholile noma imangalisa kanjani, uma kufanele ngichithe ngaphezu kwamasekhondi angama-60 ngizama ukuthola ukuthi ngingenza kanjani okuthile, ngiyayikhipha.
Sep 14, 2009 ngo-6: 54 PM
Okuthunyelwe okuhle uDoug, akakwazanga ukuvumelana nawe!